The damage being done to Oromo humanity and property by the TPLF/EPRDF regime is difficult to estimate! | QEERROO
The damage being done to Oromo humanity and property by the TPLF/EPRDF regime is difficult to estimate!
Posted on September 23, 2013 by Qeerroo
The Ethiopian Empire is generally the land of slavery for Oromo nation. Ever since oromo were colonized by Abyssinian rulers in the last decades of the 19th century, the Oromo people have been under repression of successive Abyssinian-Ethiopian regimes and now by the TPLF colonial-Apartheid regime. The ongoing harassments of Oromo nationalists is part of the general policy of the Abyssinian-Ethiopian empire-state to politically, culturally and economically subjugate the Oromo people, who are currently struggling for the right to self-rule to break free from the colonial burden of the Abyssinian-Ethiopian empire-state. Now days the scale of oppression against the Oromo people by the incumbent Wayane regime has no comparable. This government actively involved in systematic genocide and ethnic cleansing against the Oromo people.
Read More:- The damage being done to Oromo humanity and property by the TPLF EPRDF regime.docx
3 thoughts on “The damage being done to Oromo humanity and property by the TPLF/EPRDF regime is difficult to estimate!”
Wayyeessaa on September 24, 2013 at 1:30 am said:
Qeerro, barreefama shaggaa dha. Kan na raaje, Bilisa baastuu Oromooti warri ofiin jedhan hedduun, yeroo ammaa kanatti Oromoon ni koloneefatamte jechuu dhiisaniiru. Kun seenaa Oromoo duru halagaan jallifamee jiru harka ofiitiin ittumaa caalaa jali’sanii dabsuu dha. Yaa Oromoo, ka’aa sira kolonii fi rooroo jalaa lolatnee of yaa bilisoomsinuu!!!!!!!!!!!!!!!
Germew Nemera on September 24, 2013 at 6:55 am said:
tola waan lafaa argamuu hin jiruu.biyyotaa guuddaatanis taa’ee biyyotaa hinguddanne,dinna irra� ,biyyakerra argannan dhugan biyya lafa kanarra hinjirutii ,Addunyan ofittumma(selfish)isaa hama tuu qabatee jira. kanaf Afaan qofaan waan taa’uu hinjiru.oromon bakkuma kallessa taa’ee tuu afaaniin haasawaa.dinni qabenyan,humnaan,karuma hundda guyya ,guyya dhan jiijjiramaa agarsisaa jiraa.
kayyoo on October 12, 2013 at 10:25 pm said:
rakkoon guddaan oromoo mudatee jiru yeroo ammaa rakko tokkummaa dhabufii dina walin dhabbatanii oromoo dabarsanii kennudha .oromoon gabrummaa hamaa bara dheraa jala kan tureefis ka’umsi kanuma kanaaf waan guddaan irratti hojjetamuu qabuu warreen akkana kanaa uf keessaa baasu fi tokkummaa irrattii hojjechuu dhaan waliin ka’anii dina duraa dhabbachutu nu baasa yeroo amma OPDOn illee gongummi heu kessa jiraa wayyanee waliin sababiin issaas gochaan wayyanee kan ijaa baasaa ta’usafii dhimmaa oromoofi oromiyaa irraatti mirgaa murtessuu dhabanii jiruu kan waan hunda kkaa barbadutti murteessa jiruuf OPDO asiif achiin akka’aa jiruu Tigrota dha kaan keessi OPDO boba’ee jira tokko tokkoon mana hidhaa senaa jiruu kun dhimmaa oromoo hunda ilaallatu waan taheef yeroo kamiyyuu caalaa ummatni oromoo dammaquu qaba OPDOn wayyanee dura dhabbachuuf isa dhumaarra gesse jirtii ,teenyee qofa iyyuun gatii hin qabuu adaraa warreen biyyaa alaa jirtaan wal nyaachuu dhisaatii ka’aa waliin dhaabbadha yeroon ittii oromoon gabrummaa jalaa ba’u amma ta’uu qaba.Injifannoon kan ummaata oromooti.